ကျွန်တော့်ဘ၀ ညမဟုတ်တော့ရင်….. – PoemsCorner
ကြူးတို့ ပျောက်ကွယ်တဲ့ည…..ဒီထက်ပိုဆိုးတာက လျှပ်စစ်မီးပါ ပျက်နေတာ….ဘယ်အရာမှ မပီပြင် မထင်ရှား အရာအားလုံး
၀ိုးတ၀ါး…လူတိုင်းငြင်တဲ့ ည…လူတိုင်းကြဉ်တဲ့ ဘ၀…..
သူ့ ဘ၀လည်း ည ပါဘဲ..
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ဘ၀နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် ည ပေါ့
ပြည့်ပြည်စုံစုံပြောရရင် အလင်းရောင်တွေနဲ့ည …ကြယ်တွေစုံတဲ့ည…လမင်းတစ်ရာ သာသောည…ပိုးစုန်းကြူး
တို့ ပျော်မြူးသောည….အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ်မီး မှန်သောည..မြို့ ပြည…လူတိုင်းတောင့်တတယ်..လိုလားတယ်…
ကျွန်တော်နဲ့ သူ နဲ့ လေ…..
မထင်မှတ်ခြင်း လမ်းမပေါ်မှာ နှလုံးသားခြင်း ၀င်တိုက်မိကြတာပေါ့…ဘယ်လိုပြောရမလဲ…ကျွနန်တော့်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားတွေ အရမ်းခုန်လို့ …..အလုံပိတ်ထားတဲ့အသံသေတ္တာတွေကို ဖွင့်ကြည့်တော့ ဆွံ့ အမှုတွေက တနင့်တပိုး….
နှစ်ယောက်သား အချစ်ရဲ့ဖြူစင်သန့်ရှင်း တဲ့၇နံ့ကို မိန်းမော သွား ကြ တာ …..သူ ဟာ ကျွှန် တော့် ဘ၀ရဲ့လိုအပ်နေ တဲ့ 
အလင်း ရောင် တ ခု မို့ခဏတာမက်ခွင့်ရတဲ့ အိပ်မက်ဆိုလည်း ကျွန်တော် မက်လိုက်မယ်ဗျာ…သူ့ ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့ ..ထာဝရ ထွန်းလင်းပေးဖို့ကိုလည်း မမျှော်လင့်ရဲခဲ့ ပါ ဘူး….ကျွန်တော်တို့ခံစားချက်တွေ ထပ်တူကျခဲ့ကြတယ်ဗျာ…ကျွန်တော်တို့ အချစ်တွေဟာခိုင်မြဲလို့ ..ဘယ်တော့မှ မဝေးဘူးလို့ ယုံကြည်ခဲ့ကြတာ…..
ဒါပေမယ့်ဗျှာ…ရင်ခုန်သံတွေမြစ်ဖျားခံတဲ့အချစ်ရဲ့ စီးဆင်းမှု အဆုံးသတ်ဟာ ဘာ လဲ….
ကျွန်တော်တို့သံယောဇဉ် အထပ်ထပ်နဲ့ရစ်ပတ်ခဲ့တဲ့ ဒီကြီုး…..
ယုံကြည်မှုတွေ အထပ်ထပ်နဲ့ ပုံလောင်းတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဒီကြိုး….
အရာရာနားလည်မှုတွေနဲ့ ဘယ်သူမှဖြတ်လို့ မရတဲ့ဒီကြိုး ….
ကံစီမံရာ ဓါးတစ်လက်ထဲနဲ့ဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရတဲ့ နောက် ဆုံးတော့ …….
ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရရင် အလွမ်းတွေ ထွန်းလင်းတဲ့ည…၀မ်းနည်းမှုတွေသာယာသောည…တမ်းတမှုတွေ လောင်ကျွမ်း
တောက်ပသော ည…အထီးကျန်မျက်ရည်တွေ အိတ်ပေါက်တဲ့ည….ဆွေးမြေ့မှုတွေ နရီခတ်တဲ့ ည..ငိုကြွေးည…ကြေကွဲည…
ဒီလိုဘ၀ ဒီလိုညတွေထဲမှာ ကျန်ခဲ့တယ်…
ကျွန်တော့်ဘ၀ ည မဟုတ်တော့ရင်လေ………..။ ။
In: ကဗျာ Posted By: azure883 Date: May 9, 2011
Leave comment 1 Comment & 193 views
By: အသဲကွဲမိုး at Sep 20, 2011